မြန်နှုန်းမြင့်အမြန်ရထားဖြင့်ဆက်သွယ်မှုအကွာအဝေးကိုတိုလိမ့်မည်။ 2020 သမ္မတ၏နှစ်ပတ်လည်အစီအစဉ်တွင်ရထားလမ်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပါဝင်ပြီးအမြန်ရထားရထားနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများကိုလည်းစီစဉ်ထားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Levent Yıldırım, “Samsun Sarp Demiryolu ülke açısından, bölge açısından daha ivedilik taşıyan bir projedir. Bölgeye bir demiryolu yapılacaksa bu Samsun Sarp Demiryolu [ပို ... ]
"ဗဟိုအာရှမီးရထားထိပ်သီးအစည်းအဝေး" တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ၏ပထမဦးဆုံး 21-24 အောက်တိုဘာလ 2019 ရက်စွဲ, အီရန်မီးရထားအဖွဲ့, ကာဇက်စတန်မီးရထား, ဥဇဘက်မီးရထားနှင့်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်မီးရထားကိုယ်စားလှယ်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူတူရကီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်ကျင်းပခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်အားဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းများစတင်ခဲ့သည့်Eskişehirရထားဘူတာသည်မူရင်းနှင့်အညီပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ အလုပ်များကို 2020 နှစ်တွင်ပြီးစီးရန်စီစဉ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏မီးရထားလမ်း၊ အမြန်ရထားနှင့်ရထားလမ်းမြင်ကွင်းသစ်နှင့်အညီ [ပို ... ]
Aydınlı sanayiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’dan Denizli-Aydın-İzmir çift hatlı, elektrikli demiryolu yatırımına başlanması için destek istedi. Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, sanayici işadamları [ပို ... ]
ပိုပြီးရက်ပေါင်းဖြစ်လာခဲ့သည် ... 15 14 အဝေးပြေး Bursa တဲ့ကာလ task ကိုရောက်လေ၏။ ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူယခုဖုန်းကို TCDD Özgür'lအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိသည်လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အကြံပြုဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ် [ပို ... ]
အောက်တိုဘာလအတွက်ရရှိနိုင် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan, Raillif မဂ္ဂဇင်း၏နံပါတ် "ရထားလမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံသက်သေခံထူထောင်မှု" အမည်ရဆောင်းပါးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်အဖြစ်။ İzmir-Aydınလိုင်းထဲမှာ "3 စက်တင်ဘာလ 1856 ၏ TCDD အထွေထွေမန်နေဂျာ၏မိန့်ခွန်းသောသင့်လျော်သော [ပို ... ]
တူရကီတွင်ကျင်းပပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan "တူရကီအတွက်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုပုံများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ" ဟုအဆိုပါပိတ်ပွဲအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ Turhan ဝန်ကြီး, တူရကီအတွက်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်မှုစီမံကိန်း [ပို ... ]
TCDD 163 ။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲစီးရီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာများ၏İzmirပြည်နယ်ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်း TCDD, တူရကီရထားဘူတာတွင်ကျင်းပခဲ့သည်အောက်မှာနှစ်မြောက်လှုပ်ရှားမှုများ။ TCDD ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အစ္စမေးလ်ခေတ်နှင့် [ပို ... ]
"လှုပ်ရှားမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှတူရကီစီမံကိန်း Erzurum အတွက်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်း" Erzurum အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံန်ကြီးဌာနနှင့်ဥရောပယူနီယံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားမိမိခရီးစဉ်အတွင်းစကားပြောဝန်ကြီး Turhan, သူဟာ join ဖို့မြို့ဆီသို့ရောက် လာ. , ကဆိုသည်။ [ပို ... ]